Aubameyang oo ku guuleystay xiddiga xilli ciyaareedka ugu fiicanaa Kooxda Arsenal… (Yuu ku garaacay abaal-marintan?) – Gool FM
Haaruun August 8, 2020
(London) 08 Agoosto 2020. Pierre-Emerick Aubameyang ayaa ku guuleystay abaal-marinta ciyaaryahanka ugu fiicanaa xilli ciyaareedka Kooxda Arsenal, waxaana uu helay 74% codadkii la dhiibtay, isagoo abaal-marinta ku garaacay labo ka mid ah xiddigaha Gunners.
Weeraryahankan ayaa xilli ciyaareed qurux badan ku qaatay Arsenal, waxaana uu ku dhammaystay isagoo markale ah ciyaaryahanka ugu goolasha badan kaddib markii uu 29 gool dhaliyey tartammada oo dhan oo ay ku jiraan goolashii uu ka dhaliyey final-kii FA Cup-ka.
Aubameyang ayaa macallin Mikel Arteta u gacan geliyey Koobkiisii ugu horreeyey isagoo tababare u ah Arsenal, waxaana uu labo gool ka dhaliyey Manchester City afar dhammaadkii tartankaas ka hor inta uusan labo gool oo kale ugu shubin Chelsea, taasoo Gunners u sahashay inay gacanta ku dhigto koobkeedii 14-aad ee tartanka FA Cup-ka.
31-sano jirkaan ayaa sidoo kale hal gool looga qaaday gooldhalinta horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan kaddib markii uu la yimid 22 gool oo horyaalka ah, waxaana gooldhalintaas ku guuleystay weeraryahanka Leicester City ee Jamie Vardy oo dhaliyey 23 gool.
Aubameyang oo codadkii la dhiibtay helay 74% ayaa abaal-marintan ku garaacay goolhayaha Arsenal ee Bernd Leno, kaasoo helay 16% kana soo muuqday kaalinta labaad, halka saddexaad uu soo ciriirsaday da’ yarka Gunners ee Bukayo Saka oo helay 10% codadkii la dhiibtay.
Dhinaca kale Kabtanka Kooxda Arsenal ee Aubameyang ku dhow inuu heshiis cusub u saxiixo kooxdiisa Gunners oo uu sii joogo garoonka Emirates kaddib markii mustaqabalkiisa uu ahaa mid aan sal fadhiya lahayn bilihii dhowaa.
Wadahadallada socda waxa ay yihiin in xiddigan reer Gabon uu qalinka ku duugo heshiis saddex sanadood ah oo uu todobaadkii ku qaadanayo adduun dhan 250,000 oo gini, iyadoo heshiiskiisa haatan uu ku joogo Arsenal uu ku eg yahay sanadka 2021-ka, waxaana kooxda doonayey weeraryahankan ka mid ah Barcelona, Paris Saint-Germain iyo Inter Milan.